China ALUMINUM COMPOSITE PANEL (YEMACHINA) fekitari uye bhizimisi | Alucosun
Aluminium chinoumbwa Panel (FOR SIGNAGE)
Alucosun inopa yakanakisa mashandisirwo ekushandisirwa neakawanda mavara uye akasiyana magadziriso sarudzo. Alucosun inopawo kuvimbika mukuita nekusimba asi inochinja nzvimbo uye musimboti. Uyezve vamiririri veAlucosun vanogara vari kubasa revatengi neruzivo rwechigadzirwa uye mazano akakodzera pese pazvinenge zvichidiwa.
Alucosun yakawana budiriro huru nekutsungirira kusingagumi mune zvese zvigadzirwa uye sevhisi, sezvinoita kuzvipira kwedu pakubudirira kwako mumakore makumi maviri apfuura.
● Yakanyanya kutsetseka pamusoro uye akasiyana mavara:
Tinogona kupa RAL uye Pantone mavara, anosanganisira yakakwira gloss (85-95%), mat gloss, brushed, girazi, uye matanda akapedza bhodhi uye akagadziridzwa kune zvaunoda.
● Mamiriro akasiyana-siyana:
Upamhi kubva 1000mm kusvika 2000mm. Kureba kunogona kuve kwakagadziridzwa kune zvaunoda kupfuura zvakaenzana saizi zvinoenderana nemaitiro ekugadzirisa.
● Yakakwirira mamiriro ekunze-kuramba uye kukwiza-kuramba:
Surface kurapwa neepamusoro-giredhi ultraviolet-inodzivirira polyester pendi (ECCA) chikumbiro, vimbiso yemakore 8-10; kana ukashandisa pende yeKYNAR 500 PVDF, yakavimbiswa makore gumi nemashanu kusvika makumi maviri
● Kugadziriswa kuri nyore uye nzira dzakasiyana siyana:
Inogona kugadziriswa kumhando dzakasiyana uye inogona kugadziriswa kuburikidza nekucheka, kukotama, kurova, kubaya uye kupenda.
Yedu yekugadzira fekitori ndeye eco - inoshamwaridzika nekusviba zero
Aluminium ganda ukobvu
Thermal Deformation Kupisa
Kukwidziridzwa kwekuwedzera kwekuwedzera
Performance kwemhepo kumanikidza kuramba
Zvivakwa Zvinopesana neMvura
Pashure: China OEM Wood Ruvara Acp - Alucosun PE - Alucosun
Zvadaro: ALUMINUM LATTICE PANEL
Aluminium Yakaumbwa Panel 3mm
Aluminium Yakaumbwa Mapepa Mapepa
Aluminium Huchi yekudyara Inoumba Panel
Fireproof Aluminium rinoumba Panel
Pe Kupfekedza Aluminium Yakaumbwa Panel
ALUMINUM SOLIDER PANEL